Man United Oo Lasoo Saxiixanaysa Kieran Trippier – Garsoore Sports
Kooxda Kubbada-cagta ee Manchester United ayaa xiiseeyneeysa dambeedka-middig ee kooxda Athletico Madrid Kieran Trippier.
Red Devils ayaa suuqii bishii Janaayo si weyn loola xiriirinayay xiddigan balse uma suuragelin inay lasoo saxiixdaan.
Haatan United ayaa dib u cusbooneysiisay raacdadii ay ugu jirtay Trippier sida laga soo xigtay majaladda MEN.
Xiddigii hore ee kooxda Tottenham ayaa wuxuu ahaa taageere United ah dhammaan noloshiisa wallow uu jeclaan lahaa inuu u dhaqaaqo Old Trafford xagaagan haddana United ayaa keliya heli karta adeegiisa bisha Janaayo marka uu dhammeeysto ganaax lagu soo ragay kaddib markii lagu uu jabiyay qaar kamid ah sharciyadda qamaarka.
Tababaraha United Ole Gunnar Solskjaer ayaa la fahamsan yahay inuusan ku qanacsaneyn wax soo saarka Aaron Wan-Bissaka wuxuuna u aqoonsaday Trippier inuu yahay xiddig ku habboon ee tartan gelin kara Wan-Bissaka. Xitaa Haddii United ay u weecato seddex daafac dhexe iyo labbo garab oo daafaca ah, Trippier wuxuu noqonayaa mid kaga haboon Wan-Bissaka inuu safka 1aad kusoo billoowdo.
Xiddigan u dhashay dalka Ingiriiska, oo 30 jir ah, ayaa qandaraaskiisa Atletico wuxuu dhacayaa sannadka soo aadan, waxaana la fahansan yahay inuu sameeyay qorshe uu si joogto ah ugu laabanayo dalkiisa hooyo.